“Jose Mourinho mas’uul kama ahan sheekada ka socota kooxda Manchester United” – Gool FM
“Jose Mourinho mas’uul kama ahan sheekada ka socota kooxda Manchester United”
(Manchester) 14 Okt 2018. Difaacii hore kooxda Liverpool Markus Babbel ayaa carabka ku adkeeyay in hoos u dhaca ku yimid kooxda Manchester United ay mas’uul ka yihiin maamulka kooxda, isla markaana uusan sabab u ahayn tababare Jose Mourinho.
55 jirkan reer Portugal ayaa halis ugu jira in laga fasaxo shaqada tababarka ee kooxda Manchester United, sababa la xiriira hoos u dhaca ku yimid Red Divalis xili ciyaareedkan iyo labadii xili ciyaareed ee lasoo dhaafay uusan ku guuleysan midkood horyaalka Premier League iyo Champions League.
Manchester United ayaa xili ciyaareedkan kaga jirta kaalinta sideedaad dhanka kala sareynta horyaalka Premier League kadib 8 kulan ee laga soo ciyaaray.
Markus Babbel ayaa yiri: “Wax qalad kuma lahan Jose Mourinho sheekadan ka socota Manchester United, qof walba wuxuu layaaban yahay inaysan ciyaareynin kubada cagta ee ku saleysan qaab weerar”.
“Jose Mourinho waa macalin qorshihiisa ku saleysan qaab difaaceed wuxuuna doonayaa inuu ku guuleysto koobab, hadii aan si daacad ah u hadlo, ilaa iyo haatan ayuu adeegsadaa”.
“Sida ay ila tahay dhibaatada waa maamulka kooxda, sababtoo ah waxay go’aansadeen inay lasoo saxiixdaan Jose Mourinho, haatan ma aysan sameynin waxa uu doonayo ama kuma kalsooni qabaan, xitaa Manchester United ma oga waxa ay doonayaan”.
Wakiilka Aaron Ramsey oo ka jawaab celiyay wararka ku aadan in Manchester United ay xiiseeneyso saxiixa laacibka reer Weles